Taliyaha Booliska Oo ka Hadlay Askari Xabad ka qaraxday qorigiisii u geeriyooday | Salaan Media
Taliyaha Booliska Oo ka Hadlay Askari Xabad ka qaraxday qorigiisii u geeriyooday
WAJAALE (Somaliland.Org)- Askari ka tirsanaa ciidanka booliska magaalada Wajaale ee gobolka Gabiley ayaa maanta geeriyooday ka dib markii ay ku dhacday rasaas ka qaraxday qorigiisii, sida shabakada warakra ee Somaliland.Org uu noo xaqiijiyay taliyaha ciidamada booliska Somaliand sareeye guuto C/laahi Fadal Iimaan.
Askarigan oo magaciisa la odhan jiray marxuum Aadan Axmed Diiriye, kana tirsanaa ciidamada booliska ee ka hawl-gala saldhiga booliska magaalada Tog Wajaale ayaa la sheegay in xiliga ay rasaastu ka qaraxday uu ku jiray gaadhka ama ilaalada saldhiga booliska Wajaale.
Taliyaha ciidamada booliska Somaliland sareeye guuto C/laahi Fadal Iimaan, ayaa sheegay in askarigaasi uu u dhintay rasaas si aan ku tallo-gal ahayn uga qaraxday qori uu haystay isla markaana rasaasta ka dhacay qoriga marxuumkaasi aanay cid kale wax dhibaato ah gaadhsiinin.
Taliyuhu ciidamada booliska Somaliland wuxuu intaasi ku daray in ciidamada danbi baadhistu ay baadhitaan ku hayaan sababta keentay falkaasi iyo sida uu u dhacay.
C/laahi Fadal Iimaan ayaa ka tacsi u diray ehelada, qoyska iyo ciidamada booliska Somaliland geeri ku timid marxuum Aadan Axmed Diiriye, inuu samir iyo iimaan ka siiyo, isaga oo xusay inuu aad uga xun yahay dhacdadaasi.
Taliyaha ciidamada booliska Somaliland ayaa ciidamada booliska ku amaanay sida hagar la’aanta ah ee ay markasta heeganka ugu yihiin ilaalinta nabadgelyada dalka iyo dadka iyo sidoo kale sida ay amaanka shacabkooda u sugayaan.
Sareeye guuto C/laahi Fadal Iimaan ayaa ugu danbayntii ugu baaqay shacabka Somaliland inay ciidamada booliska kala shaqeeyaan ilaalinta amaanka, isla markaana ciidamada la soo socodsiiyaan waxyaabaha dhibaatada keeni kara.